Sidee loo Hogaamiyaa Dal Afrikaan ah ? – Radio Daljir
Diseembar 1, 2015 10:40 g 0
Somalia, December 02, 2015-(Daljir)_ Seddex toddobaad keliya ka hor ayay ahayd markii John Mogufuli loo doortay madaxweynaha cusub ee waddanka Tanzania ,isaga oo badalay Jakaya Kikwete ,oo dowladdii uu hogaaminyay lagu eedeeyn jiray musuq-maasuq baahsan.
Madaxweynaha cusub ayaa markii la doortay ka dib isbadallo muuqda sameeyay isaga oo ka hor-yimid arimo dhowr ah oo uu ugu horeeyo musuq-maasuqa, waxaana soo koobaynaa 10-qodob oo uu John Mogufuli hirgaliyay muddo ka yar bil.
1. Madaxweynaha ayaa ka hor-yimid in lacag badan lagu bixiyo xuska maalinta xornimada Tanzania,xilli cudurka koleeraha ay dad badani ugu dhimanayaan gudaha dalkaas, waxaana taa badalkeed maalintaas uu amar ku bixiyay in la sameeyo maalin nadaafadeed oo Qaran, waxaana lacagtii loo adeegsan lahaa dhoola-tusyada ciidamada uu ku bixiyay nadaafadda Tanzania.
2. Â Waxa uu xaalad laga fajaco ku soo arkay Isbitaalka Muhimbili oo uu booqashadiisi ugu horreysay ku bixiyay, waxaana maalintaa kaddib uu amray in madaxda dowladda ay qayb ka qaataan sidii sarriiro loogu heli lahaa bukaanada dhulka jiifa ,waxaana uu amray in 200 oo milyan oo ah lacagta wadankaas ah wax looga qabto dhibaatadaas.
Maalmo ka dib 300 oo sariirood ayaa isbitaalka la dhigay,waxaana uu shaqada ka ereyay madaxdii maamulisay goobtaa caafimaad isaga oo kuwa kale ku soo badalay ,waxaana la hagaajiyay qalab-yadii raajada oo halaysnaa ,iyadoo lacag u dhaxeysa $10,000 ilaa $7,000 oo dollar loo diray Isbitaalka.
3. Seddex maalin gudaheed Mogufuli ayaa xubnaha dowladdiisa ku amray in ay booqdaan goobaha fog-fog ee dalka si wax looga soo ogaado xaaladda ay ku sugan-yihiin dadka ku nool goobaha ka baxsan laamiyada.
4. Wuxuu jaray kharashaadkii madaxda xukuumadda kaga bixi jiray safarada dibadda, si la mid ah shaqooyinkaas waxaa qaban doona safiirrada dalka Tanzania u fadhiya caalamka, iyadoo kaliya madaxweynaha ,ku xigeenkiisa iyo raâ€™iisul-wasaaraha Â ay safar dibadda ah aadi karaan.
5. Waxaa uu kordhiyay hoolalka hogaanka dowladda ay ku shiraan.
6. Isaga iyo xubno kale oo xukuumadda ka tirsan ayaa hadda baaraya musuq-maasuq lagu arkay dekadda magaalada Daaru-salaam kaddib markii 350 konteenar oo kuwa ganacsiga ah la waayay sharciyadii ay wadanka ku soo galeen.
7. Markii uu u safrayay magaalada Dodoma oo 600-km u jirta caasimada, ma uusan qaadan diyaarad gaar ah si uu usoo furo shir uu barlamaanku halkaa ku lahaa.
8. Kulankii baarlamaanka ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Dodomo fariin cad oo ku aadan la dagaalanka Musuq-maasuqa ayuu u diray laamaha dowladdiisa.
9. Wuxuu ballan-qaaday inuu kor u qaadi doono la xisaabtanka hayâ€™adaha xukuumadda si looga dheeraado in la musuq-maasuqo hantida guud.
10. Waxa uu xubnaha barlamaanka dalkaas u sheegay in shacabka Tanzania ay isaga howlo badan ka sugayaan.
Ugu danbayn, howsha adag ee u soo bandhigay madaxweynaha Tanzania ayaa aad looga hadal hayaa baraha ay bulshadu kuwada xiriirto, iyadoo loo arkaa mid ay ku dayan karaan madaxda kale ee Afrika si la mid ah madaxweynaha Ruwanda Pual Kigame oo la sheegay in uu yahay rajo u soo if-baxday Bariga Afrika.